တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ညမှာ ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းဖိုး ပံ့သကူ အလှူလုပ်မယ့် ဖြူဖြူထွေး – Cele Posts
မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ ဆယ့်နှစ်လရာသီပွဲတော်တွေထဲက တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် နေ့လေးက ဒီကနေ့မှာ ကျရောက်လို့ လာပြန်ပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့က တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ည ပံ့သကူ အဖြစ် ငွေ၊ စားသောက်စရာ၊ ပစ္စည်းအသုံး အဆောင်တွေကို လှူဒါန်းခြင်း အလေ့အထလေး ကလည်း ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ လက်ဆင့်ကမ်း ထွန်းကားနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင် တွေ ကလည်း ဒီကနေ့လို တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ညလေးမှာ ပံ့သကူ ပစ်ရင်း အလှူအတန်းလေးတွေ ပြုလုပ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းဆယ်လီ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးကလည်း အလှူအတန်းတွေ အများကြီး ပြုလုပ်နေသူတွေပီပီ ဒီကနေ့လို တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ည မှာလည်း ကုသိုလ်လေးပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထား တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးက “ဒီနေ့ည ဖြူဖြူပံ့သကူပစ်ပါ့မယ် 😍 ​ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ …..? (၁၀)သိန်း ရယ် မြန်မာ့ဝမ်းဆက်ရယ် ဆန်ရယ်” ဆိုပြီး တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ညမှာ ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းဖိုး ပံ့သကူ အလှူ လုပ်မယ့်အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။
ဖြူဖြူထွေး ကတော့ သူမ သမာအာဇီဝကျကျ ရှာဖွေထားသမျှထဲက ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းဖိုးကို ပံ့သကူပစ် အလှူပြုလုပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် ဒီထက်မက အောင်မြင်ပြီး စီးပွားလာဘ်လာဘများ တိုးပွားပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့နေ့ ညမှာ ငှကေပျြ (၁၀) သိနျးဖိုး ပံ့သကူ အလှူလုပျမယျ့ ဖွူဖွူထှေး
မွနျမာလူမြိုးတို့ရဲ့ ပြျောရှငျစရာ ကောငျးတဲ့ ဆယျ့နှဈလရာသီပှဲတျောတှထေဲက တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့ နလေ့ေးက ဒီကနမှေ့ာ ကရြောကျလို့ လာပွနျပါပွီ။ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ မွနျမာလူမြိုးတို့က တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့နညေ့ ပံ့သကူ အဖွဈ ငှေ၊ စားသောကျစရာ၊ ပစ်စညျးအသုံး အဆောငျတှကေို လှူဒါနျးခွငျး အလအေ့ထလေး ကလညျး ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ လကျဆငျ့ကမျး ထှနျးကားနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာရှငျ တှေ ကလညျး ဒီကနလေို့ တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့နညေ့လေးမှာ ပံ့သကူ ပဈရငျး အလှူအတနျးလေးတှေ ပွုလုပျကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အှနျလိုငျးဆယျလီ တဈယောကျဖွဈတဲ့ ဖွူဖွူထှေးကလညျး အလှူအတနျးတှေ အမြားကွီး ပွုလုပျနသေူတှပေီပီ ဒီကနလေို့ တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့နညေ့ မှာလညျး ကုသိုလျလေးပွုလုပျဖို့ စီစဉျထား တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖွူဖွူထှေးက “ဒီနညေ့ ဖွူဖွူပံ့သကူပဈပါ့မယျ 😍 ​ဘယျနရောလဲဆိုတော့ …..? (၁၀)သိနျး ရယျ မွနျမာ့ဝမျးဆကျရယျ ဆနျရယျ” ဆိုပွီး တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့နညေ့မှာ ငှကေပျြ (၁၀) သိနျးဖိုး ပံ့သကူ အလှူ လုပျမယျ့အကွောငျး ပွောလာပါတယျ။
ဖွူဖွူထှေး ကတော့ သူမ သမာအာဇီဝကကြ ရှာဖှထေားသမြှထဲက ငှကေပျြ (၁၀) သိနျးဖိုးကို ပံ့သကူပဈ အလှူပွုလုပျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ ဒီထကျမက အောငျမွငျပွီး စီးပှားလာဘျလာဘမြား တိုးပှားပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွ ပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။
မှော်ဘီခြံကြီးထဲမှာ ခင်မင်သူတွေကို ညအိပ်ညနေ ဖိတ်ခေါ်ပြီး အလှူလေး တစ်ခုကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်တို့ မိသားစု